Kugadzirisa iyo Apple Watch Series 0 Dock inoponesa hupenyu hwebhatiri | Ndinobva mac
Zvirokwazvo vashoma vashandisi vatove ne Chizvarwa chekutanga Apple Watch kana Apple Watch Series 0, asi kwandiri mushure mekutanga kutengwa kweimwe yeApple Watch Series 4, iyo Series 0 yakapfuudza kune hama uye iye anonyunyuta nezve yakaderera bhatiri iyo wachi ine (iyo isingasvike kumagumo zuva) saka chiitiko chacho chakashata.
Zviripachena kuti wachi yatove nechaji mairi uye isu hatisi kufunga nezve mukana wekuchinja bhatiri kune nyowani, saka mhinduro yakashanda chaizvo ndeye gadzirisa uye bvisa zvinoshandiswa zvakachengetwa kubva kuDock kuti anoshandisa zvishoma kana kuti haabatike Nezvo, bhatiri reawa "rinomutsidzira" uye tinogona zvakare kushandisa mamwe matanho anonakidza kusevha zvishoma bhatiri.
Mahara maapplication kubva kuDock uye uwane mamwe kuzvitonga
Iyo nyowani vhezheni yeWOSOS 5 zvichienda mberi zvakasiyana nemavhezheni apfuura ayo iyo yekutanga Apple Watch modhi inayo, ndosaka manejimendi achiitwa zvakasiyana zvakare. Mune ino kesi, isu tiri kuzotarisa kuchizvarwa chekutanga, chinova icho chinogona kuve nematambudziko mazhinji kana tichitaura nezve kuzvitonga.
Achangobva kushandiswa maapplication kana anosvika gumi emaapple ako aunofarira anoonekwa muDock kuitira kuti kana paunenge waakuda anogona kuvhurwa ipapo ipapo uye izvi zvinoita kuti kuzvimirira kwewachi kukanganisike. Ndokusaka kana iwe uine chizvarwa chekutanga Apple Watch iwe unofanirwa kudzivirira kuva nemapurogiramu akawandisa muchikamu chino. Kune izvi isu tinongofanirwa kuwana iyo Tarisa kunyorera pane iyo iPhone uye tinya pane 'Dock' sarudzo. Zvino tava nazvo tinya pane 'Hora' uye bvisa iwo maapplication atisingashandise zuva nezuva. Nenzira iyi bhatiri rewachi rinowedzera zvakanyanya.
Iwe unogona zvakare bvisa mabhora kubva ku "My spheres" sarudzo izvo zvatisingazomboshandisa kubva kuApplication application. Nenzira iyi tinodzivirirawo wachi kubva pakuita kuti ndangariro dzishande nguva dzose uye isu tinochengetedza bhatiri. Zvine musoro kushandisa bhatiri kunodzikira asi usatarisira zvishamiso, kunyanya kana iri wachi yakatengwa pazuva rekuvhurwa kwayo zviri pamutemo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Kugona kwakanaka kweDock muApple Watch Series 0 inotibvumidza kusevha bhatiri
Photo Mupepeti Movavi inowanikwa chete 1 euro
Iyo T2 chip inogona zvakare kuvharidzira imwe MacBook Mhepo kugadzirisa